१ कोरिन्थी ११:१-३४
११ मैले ख्रीष्टको देखासिकी गरेजस्तै तिमीहरू मेरो देखासिकी गर। २ अब म तिमीहरूको तारिफ गर्छु, किनकि सबै कुरामा तिमीहरू मलाई सम्झन्छौ अनि मैले तिमीहरूलाई जे-जस्ता शिक्षाहरू दिएको थिएँ, त्यसमा तिमीहरू अटल छौ। ३ तर तिमीहरूले यो कुरा बुझ भनी म चाहन्छु, हरेक पुरुषको शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ; त्यसैगरि स्त्रीको शिर पुरुष अनि ख्रीष्टको शिर परमेश्वर हुनुहुन्छ। ४ आफ्नो शिर ढाकेर प्रार्थना वा भविष्यवाणी गर्ने पुरुषले आफ्नो शिरको बेइज्जत गर्छ; ५ तर शिर नढाकी प्रार्थना वा भविष्यवाणी गर्ने स्त्रीले आफ्नो शिरको बेइज्जत गर्छे, किनकि त्यसो गर्नु भनेको ऊ कपाल खौरिएकी स्त्री हुनु बराबर हो। ६ यदि कोही स्त्रीले आफ्नो शिर ढाक्दिन भने उसले पनि आफ्नो कपाल छोटो काटोस्। तर यदि स्त्रीले कपाल छोटो काट्नु वा खौरनु अपमानजनक कुरा हो भने उसले आफ्नो शिर ढाकोस्। ७ पुरुषले आफ्नो शिर ढाक्नुहुँदैन, किनकि ऊ परमेश्वरको प्रतिरूप अनि महिमा हो तर स्त्रीचाहिं पुरुषको महिमा हो। ८ किनकि परमेश्वरले स्त्रीको शरीरबाट पुरुष बनाउनुभएको होइन तर पुरुषको शरीरबाट स्त्री बनाउनुभएको हो; ९ अनि त्यसैगरि स्त्रीको निम्ति पुरुष सृष्टि गरिएको होइन तर पुरुषको निम्ति स्त्री सृष्टि गरिएको हो। १० त्यसैकारण स्वर्गदूतहरूको खातिर स्त्रीले अधीनताको चिन्हस्वरूप आफ्नो शिर ढाक्नुपर्छ। ११ यसबाहेक, प्रभुका चेलाहरूमाझ स्त्रीविना पुरुषको अस्तित्व हुँदैन न त पुरुषविना स्त्रीको अस्तित्व हुन्छ। १२ किनकि परमेश्वरले पुरुषको शरीरबाट स्त्री बनाउनुभएको हो र पुरुषचाहिं स्त्रीबाट आएको हो; तर सबै थोक परमेश्वरबाटै आएका हुन्‌। १३ तिमीहरू आफै फैसला गर: के स्त्रीले शिर नढाकी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नु उचित हो? १४ के प्रकृति आफैले तिमीहरूलाई यो सिकाउँदैन, यदि पुरुषको कपाल लामो छ भने त्यो उसको निम्ति अनादर हो; १५ तर स्त्रीको कपाल लामो छ भने त्यो उसको निम्ति गौरव हो? किनकि शिरपोसको साटो तिनलाई कपाल दिइएको छ। १६ तथापि, यदि कोही मानिस अरू नै चलनलाई लिएर बहस गर्न चाहन्छ भने हामीसित अरू कुनै चलन छैन न त परमेश्वरका मण्डलीहरूसित छ। १७ तर यी निर्देशनहरू दिंदा म तिमीहरूको तारिफ गर्दिनँ, किनकि तिमीहरू भेला हुँदा तिमीहरूको फाइदाभन्दा बढ्ता हानि नै भइरहेको छ। १८ किनकि पहिलो कुरा त, तिमीहरू मण्डलीमा भेला हुँदा तिमीहरूबीच फूट हुन्छ भनेर मैले सुनेको छु र केही हदसम्म म त्यो पत्याउँछु। १९ तिमीहरूबीच गुटहरू पनि पक्कै हुनुपर्छ र यसले गर्दा तिमीहरूमाझ परमेश्वरले स्वीकार्नुभएका मानिसहरू को हुन्‌, त्यो पनि प्रकट हुनेछ। २० त्यसैकारण, जब तिमीहरू एक ठाउँमा भेला हुन्छौ, तब तिमीहरू प्रभुको साँझको भोज खानसक्ने हालतमा हुँदैनौ। २१ किनकि प्रभुको साँझको भोज खाने बेला सुरु हुनुअघि नै कसै-कसैले आफूले ल्याएको साँझको खाना खाइसकेका हुन्छन्‌, त्यसैले कोही भोकै हुन्छन्‌ त कोही पिएर मात्तिसकेका हुन्छन्‌। २२ के खान र पिउनलाई तिमीहरूको आफ्नै घर छैन? वा के तिमीहरू परमेश्वरको मण्डलीलाई तुच्छ सम्झन्छौ अनि केही नहुनेलाई लाजमा पार्छौ? म तिमीहरूलाई के भनूँ? के म तिमीहरूको तारिफ गरूँ? यो कुरामा म तिमीहरूको तारिफ गर्दिनँ। २३ प्रभुबाट मैले जे पाएँ, तिमीहरूलाई त्यही सिकाएँ। यही कि आफू पक्राउ पर्ने रातमा प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो २४ र धन्यवाद चढाएपछि भाँचेर यसो भन्नुभयो: “यो तिमीहरूका लागि दिइने मेरो शरीरको प्रतीक हो। मेरो सम्झनामा यो गर्नेगर।” २५ साँझको खाना खाइसकेपछि उहाँले कचौरा लिएर त्यसै गर्नुभयो र भन्नुभयो: “यो कचौरा त्यो नयाँ करारको प्रतीक हो, जो मेरो रगतको आधारमा बाँधिनेछ। जब-जब तिमीहरू यसबाट पिउँछौ, तब-तब मेरो सम्झनामा यो गर्नेगर।” २६ किनकि जब-जब तिमीहरू यो रोटी खान्छौ अनि यो कचौराबाट पिउँछौ, प्रभु नआउन्जेल तिमीहरूले उहाँको मृत्युको घोषणा गरिरहेका हुन्छौ। २७ यसकारण, जसले आफू अयोग्य हुँदा हुँदै पनि रोटी खान्छ वा प्रभुको कचौराबाट पिउँछ, ऊ प्रभुको शरीर र रगतको सन्दर्भमा दोषी हुनेछ। २८ मानिसले पहिला आफूलाई जाँचेर योग्य ठहराओस् अनि मात्र उसले रोटी खाओस् र कचौराबाट पिओस्। २९ किनकि शरीरको अर्थ के हो त्यो नबुझी खाने र पिउनेले आफूलाई दोषी ठहराउँछ। ३० त्यसैकारण, तिमीहरूमध्ये धेरै जना कमजोर र रोगी छौ, अनि कति त मृत्युको चिर निद्रामा परिसकेका छन्‌। ३१ तर हामी वास्तवमा के हौं, जाँचेर थाह लगायौं भने दोषी ठहरिनेछैनौं। ३२ तथापि, जब हामी दोषी ठहरिन्छौं, तब संसारसँगै हामीले पनि सजाय नपाओस् भनेर यहोवाबाट अनुशासन पाउँछौं। ३३ यसकारण ए मेरा भाइहरू हो, जब तिमीहरू यो भोज खान भेला हुन्छौ, तब एक-अर्कालाई पर्ख। ३४ यदि कसैलाई भोक लागेको छ भने उसले घरमै खाओस् नत्र त तिमीहरू दोषी साबित हुन भेला भइरहेका हुनेछौ। बाँकी अरू कुराचाहिं म त्यहीं आएर ठीक पारुँला।